‘सरुवारोग होइन सेतो दुबी , उपचारले ठिक हुन्छ’ – Health Post Nepal
२०७६ असार १० गते १४:३८
अनुहार तथा शरीरका कुनै पनि भागमा सेतो दाग भएमा मानिसलाई हीनताबोध हुने गरेको छ । आफ्नो सौन्दर्य बिग्रिएका कारण कसैले केही भन्छ वा कसैले नराम्रो दृष्टिकोणबाट पो हेरिरहेको छ कि भनेर दुबी भएका जोकोहीलाई लाग्न सक्छ ।
तर, दुबी आएकै कारण हीनताबोध भइरहेको छ भने त्यो त्यागिदिनुभए हुन्छ, किनकि, यसको समधान छ । आज २५ जुन, अर्थात् विश्व दुबी दिवस । मंगलबार विश्व दुबी दिवसका अवसरमा क्युटिस केयरले आयोजना गरेको जनचेतनामूलक कार्यक्रममा छालारोग विशेषज्ञ डा. धर्मेन्द्र कर्णले दुबी सरुवारोग नभएको जानकारी दिँदै उचित उपचार गरेको खण्डमा निको हुने बताए ।
नेपालमा दुबीपीडितको यकिन तथ्यांक नभए पनि चिकित्सकका अनुसार कुल जनसंख्याको २ प्रतिशतमा सेतो दुबी भएको आकलन गरिएको छ । ‘धेरै नेपाली सेतो दुबीबाट प्रभावित छन्,’ छालारोग विशेषज्ञ डा. कर्ण भन्छन्, ‘सेतो दुबी रोग होइन, यसले स्वास्थ्यमा कुनै नोक्सान पुर्याउँदैन । यसको एउटै मात्र बेफाइदा हेर्दा नराम्रो देखिनु हो ।’
के कारण हुन्छ सेतो दुबी ?
सेतो दुबी एक प्रकारको छालामा हुने समस्या हो, जुन शरीरमा छाललाई रङ दिने कोषहरूको कमीका कारण देखापर्ने गर्छ । कहिलेकाहीँ शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढी भएर त्यसले आफ्नै शरीरविरुद्ध काम गर्ने गर्छ र छालालाई रङ दिने कोषलाई नष्ट गर्दछ । डा. कर्ण भन्छन्, ‘सेतो दुबी अटो इम्युनिटी डिसअर्डर हो, जुन शरीरको रोगप्रतिरोधक क्षमताले उल्टो असर गर्दाको परिणाम हो ।’
डा. कर्णका अनुसार मानव शरीरमा मेलोनोसाइटसँगै मेक्रोफेजेज कोषिकासमेत सक्रिय रहेका हुन्छन्, जसले स्वाभाविक रूपले प्रतिरोधक क्षमता प्रदान गर्छन् । तर, कहिलेकाहीँ शरीरमा यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ, जसमा मेक्रोफेजेज कोषिका र मेलानोसाइट कोषिकाबीच बेमेल हुने गर्दछ । यस्तो हुँदा मेलानोसाइट कोषिकाको प्रतिरोधक क्षमता कम हुन्छ र निष्क्रिय हुन पुग्दछ । यसका कारण शरीरका सम्पूर्ण भागमा सेतो दुबी फैलिने कर्ण बताउँछन् ।
कार्यक्रममा सेतो दुबीबाट ग्रस्त राजेन्द्र बस्नेतले शारीरिक पीडा नभए पनि समाजले अपहेलनापूर्ण व्यवहार देखाएको गुनासो गरे । बस्नेतले भने, ‘रोग नभए पनि समाजले हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।’
सेतो दुबी प्रायः शरीरका धेरै चलिरहने अंगहरू, आँखा, ओठ, कम्मर, कुइनो, घुँडामा बढी देखापर्छ । ‘सेतो दुबी सर्ने रोग होइन, तर आफ्नै शरीरमा भने फैलिन सक्छ,’ डा. कर्णले भने, ‘सेतो दुबीमा न दाग चिलाउने गर्दछ, न त दुख्छ नै ।’ सेतो दुबी भएको मानिसले बढी तनाव लिने गर्दा दुबी बढ्ने चिकित्सक बताउँछन् । बढी तनावले प्रतिरोधात्मक क्षमतामा घढबढ गराउँछ, जसका कारण दुबी बढ्नमा मद्दत पुग्दछ ।
नेपालमै सबै उपचार उपलब्ध
नेपालमा सेतो दुबीका सबैखाले उपचार उपलब्ध छन् । सामान्यतः यसको उपचार औषधिको माध्यमबाट गरिन्छ भने फोटोथेरापीबाट पनि दुबी हटाउन सकिन्छ । डा. कर्ण भन्छन्, ‘औषधि तथा फोटोथेरापीले पनि उपचार सम्भव नभएको खण्डमा सर्जरीमार्फत उपचार गरिन्छ ।’
सेतो दुबी भएकाले के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
सेतो दुबी हुने व्यक्तिले चोटपटक लाग्ने काम गर्नुहुँदैन भने टाइट कपडा तथा जुत्ता पनि लगाउनुहुँदैन । चिकित्सकका अनुसार सेतो दुबी भएका मानिसले घाममा बस्नु फाइदाजनक मानिन्छ । तर, ११ देखि २ बजेको घामले छालालाई असर गर्ने हुँदा केही सजगता अपनाउनुपर्ने सुझाब चिकित्सकको छ ।
अनुहारबाट थाहा हुन्छ, स्वास्थ्य अवस्था, देखिन्छन् यस्ता संकेत